Barashada Fogaanta | Sapsa
Ku soo dhowow Xarunta Hubinta Fogaanta ee SAPSA. Halkan waxaad ka heli doontaa qaabab aad noola soo xiriiri karto iyadoo nalooga baahan yahay, qabashada mowduucyada la xiriira Distance Learning 2.0 isla markaana naga caawiya xallinta-isha bulshada. Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad wadaagto fikradahaaga iyo fikradahaaga. Boggan wuxuu yeelan doonaa macluumaad cusub markii la helo.
Waxaan ubaahanahay Jawaab celintaada
Ma haysaa jawaab celin ku saabsan Distance Learning 2.0? Waxaan jeclaan lahayn inaan kaa maqalno. Fadlan qaado Sahanka Hubinta Qoyska ee SAP Oktoobar: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco354jHYvl52H9m6eF-ERpyhIvr60wUcju-MGpt8qlUCl7Mw/viewform?usp=sf_link
Mid kale, qaab aan rasmi ahayn oo loola xiriiro waa iyada oo loo marayo Slack Channel, SAPSA. Haddii aad horeyba ugu jirtay Slack, waxaan nahay SAPSA ama s apsaworkspace.slack.com . Haddii aadan weli ku jirin Slack, waxaad u baahan doontaa inaad kala soo baxdo barnaamijka markaa isticmaal martiqaadkan si aad ugu biirto kooxda. Mid aad ku soo biirtay, fadlan ku soo biir kanaalka #dhiska barashada. Waad soo bixi kartaa si aad u tidhaahdid hello, u akhri mawduucyada horay looga hadlay oo aad ka bixiso ra'yi iyo fikrado. Kooxdani uma furna dadweynaha waxayna u furan yihiin xubnaha ka tirsan bulshada iskuulkayaga oo keliya. Tani waa casuumaadda: https://join.slack.com/t/sapsaworkspace/shared_invite/zt-hdobqxqt-PqB35cAfUZmTQOQuRhh~5A
Ku Saabsan Jawaabtaada & Sababta Ay Ugu Muhiim Tahay
Golaha La-talinta ayaa qorsheynaya sahan guud ee dugsiga toddobaadyada ugu horreeya ee ugu horreeya ee dugsiga si loo soo ururiyo cunno ku saabsan Barashada Fogaanta. Qoraalkan (Sabtida Ogosto 29-keeda), weli waxaa jira dhowr waxyaalood oo aanan ka ogayn sida sannadka u shaqeyn doono. In kasta oo SAPSA iyo Golahayaga La-talinta aysan u taagnayn inay beddelaan mid ka mid ah faahfaahinta xaaladda, waxaan haysannaa ilo aan ku soo uruurinno aragtidaada ku saabsan Distance Learning 2.0, oo aan uga baaraandegno isku ekaanshaha qoysaska oo dhan, la wadaagno macluumaadka sida ay diyaar u yihiin iyo xitaa dad badan- isha qaar ka mid ah xalalka qoysku hoggaamiyo.
Waqtigaan la joogo, ardaygaagu waxay ahayd inuu ka helo dhowr isgaarsiin dugsiga oo ku saabsan sida sannadka u socon doono. Haddii aad u baahan tahay caawimaad degdeg ah, fadlan si toos ah ula xiriir dugsiga taleefanka (651) 293-8735 ama adigoo tixraacaya websaydhka dugsiga. Iyada oo ku saleysan macluumaadka degmada isla markaana lagala socodsiiyey Maamulaha Duke iyo macallimiinteenna, halkan waxaa ku yaal qoraalo muhiim ah oo ku saabsan waxa laga filayo sanadka:
Dugsigu wuu iska fogaan doonaa inta lagu jiro Barashada Fogaanta 2.0
Waxaan u hogaansameynaa 7:30 AM-2PM maalin dugsiyeedka.
Dhammaan casharrada waxaa la dhajin doonaa 7:30 AM maalin kasta.
Kulamo isku mid ah ma dhici doonaan kahor 8:00 AM.
Kahor intuusan iskuulku bilaaban, qoysaska waxaa lasiin doonaa jadwal todobaadle ah oo ay kujiraan waqtiyada maado kasta, oo ay kujiraan waqtiyada kulanka tooska ah iyo macalinka "saacadaha shaqada" Dhammaan fasalada heer fasal waxay yeelan doonaan jadwal isku mid ah.
Macallimiinta lagama filayo inay waxbartaan saacadahaas ka baxsan. Waxay diyaar u yihiin wada hadalka waalidiinta saacadaha kadib sida sanad dugsiyeedka caadiga ah. Iyo, dabcan, waxay la shaqeyn doonaan casharo qorshaysan oo adag saacadaha dugsiga ka baxsan!
Khabiiro takhasus leh ayaa wareegaya usbuuc walba halkii maalinle. Khabiiro (saynis, muusig, baaritaan firfircoon iyo jimicsiga jirka) ayaa wax bari doona
oo ay heli karaan ardayda waqti isku mid ah maalin kasta (tani waxay ku jiri doontaa jadwalka toddobaadlaha ah).
Macallimiinta iyo shaqaaluhu waxay heli doonaan oo keliya marin aan caadi ahayn oo ay ku galaan dhismaha.
Helitaanka agabka iyo ka-soo-marinta dhismaha ayaa ku koobnaan doona oo keliya howlaha muhiimka ah; dugsigu ma awoodo inuu daabaco, uruuriyo ama qaybiyo shaqooyinka iskuulka ee daabacan.
Dugsigeennu wuxuu qorsheynayaa hal qalab oo waaweyn oo la soo qaado dhammaadka Sebtember. Taariikhda iyo faahfaahinta TK.
Kulamada Google lama adeegsan karo iyadoon shaqaaluhu joogin.
SAPSA waxay ardayda iyo qoysaska u fidin kartaa barxad ay ku caweeyaan kuna dhexgalaan khadka tooska ah kormeerka waalidka. Tafaasiisha wali way shaqeysaa
Hoosna waxaa ku yaal qoraalka Dr. Duke ee Google doc oo ay dib u cusbooneysiineyso markii macluumaad cusub la heli karo. Waxaad sidoo kale toos u aadi kartaa websaydhka dugsiga si aad uga hesho macluumaadkaas: https://docs.google.com/document/d/1K2ttYh_IN7cMP_NCcYEgcILtdP6Ww6iK52llpalD3bo/edit
Ku soo dhowow sanad dugsiyeedka 2020-21!
Tani waxay noqon doontaa sanad-dugsiyeed aan weligood horay u soo marin! Dukumiintigaani wuxuu noqon doonaa meel aan isku dayno inaan ku hayno dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay, si aad dib ugu laaban karto waqti kasta. Waan sii wadi doonaa inaan cusbooneysiino.
Iskuulku wuxuu bilaabmayaa Talaadada, Sebtember 8, fasalada 1-5, iyo Khamiista, Sebtember 10, xanaanada. Toddobaadka ka horreeya, waxaad heli doontaa faahfaahin ku saabsan sida loola xiriiro macallimiinta iyo sida ilmahaagu u heli karo casharo iyo fasalo.
Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul Waxaad ka heli kartaa macluumaad faahfaahsan iyo cusbooneysiin degmo dugsiyeedka websaydhada soo socda:
Sanadaha caadiga ah, waxaan ka codsaneynaa qoysaska inay soo iibsadaan liistada sahayda iskuulka ee carruurtooda ay ugu adeegsadaan fasalka. Sababtoo ah kuwani maahan waqtiyo caadi ah, Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul waxay u fidin doonaan "xirmo" waxbarasho oo sahay u ah arday kasta. Ma heli doonno sahaydan illaa dhammaadka bisha Sebtember. Toddobaadyada ugu horreeya sannadka, waxa kaliya ee aad u baahan doontaa waa:
Crayons, qalin midab leh ama calaamado
Bilaabidda - Liiska Hubinta Barashada Fogaanta
Fadlan u fiirso oo u isticmaal liistada hubinta tiknoolajiyada sidii hage si aad u hubiso inaad diyaar u tahay maalinta koowaad ee dugsiga. Liiskan hubinta waxaa laga heli karaa spps.org/fallchecklist .
Ipad loogu tala galay Xanaanada iyo Ardayda Cusub
Ipad-yada waxaa loo heli doonaa qaadista dhinaca isgoyska ee dugsiga Arbacada, Sebtember 2, laga bilaabo 3:00 ilaa 6:00 PM. Waxaan kuu soo diri doonnaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan qaadista todobaadka soo socda.
IPads - Caawinaad iyo Taageero
Haddii Ipad-kaaga sanadkii hore waxyeelo gaadhay ama u baahan yahay in la beddelo, fadlan ku soo wargeli arrinta adoo u diraya email ama wac Adeegyada Teknolojiyada Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul:
Wac: 651-603-4348 inta udhaxeysa 7:00 AM iyo 4:00 PM. Fadlan ka tag fariin faahfaahsan oo wicitaankaaga ayaa la soo celin doonaa sida ugu dhakhsaha badan.
iPads - Gelitaanka Barnaamijyada
Haddii aad u baahan tahay in lagaa caawiyo Seesaw, Schoology ama barnaamijyo kale oo degmadu oggolaatay, fadlan eeg macluumaadka ku yaal spps.org/ipadhelp . Haddii aadan aqoon waxa kuwani yihiin, ha ka welwelin! Macallimiintu waxay ka caawin doonaan ardayda inay bartaan ama dib u bartaan aaladaha teknolojiyadda ee ay ugu baahan doonaan sannad dugsiyeedka.
Iskuulka lala xiriirayo
Haddii aad su'aalo qabtid, ama aad u baahan tahay inaad la xiriirto qof iskuulka jooga, fadlan soo wac 651-293-8735 oo ka tag fariin. Waxaan ku soocelineynaa wicitaankaaga sida ugu dhaqsaha badan. Waxaad sidoo kale emayl ugu diri kartaa karraanigeena, Jane Novak jane.novak@spps.org . Laga bilaabo Ogosto 31, waxaad la xiriiri kartaa mid kasta oo ka mid ah macallimiinta ilmahaaga emayl ahaan, ama adigoo uga tagaya farriin ku jirta farriinta codkooda. Adeegso 651-293-8735 iyo kan
iUpdate - Cusbooneysii Macluumaadka Xiriirkaaga
Waxaan u adeegsanaa emayl otomaatig ah, fariin qoraal ah iyo taleefoon si aan ula xiriirno qoysaska wixii ku saabsan wararka iyo macluumaadka muhiimka ah ee dugsiga, dhacdooyinka, joojinta cimilada, xaaladaha degdegga ah iyo waxyaabo kale oo badan. Fadlan ku cusbooneysii macluumaadka xiriirkaaga nidaamka iUpdate khadka tooska ah: https://www.spps.org/Page/31224 Kala xiriir Jane Novak, karraaniga dugsiga, wixii caawimaad ah, ka hel jane.novak@spps.org .
Waxaad sidoo kale kala soo bixi kartaa barnaamijka MySPPS Google Play Store ama Apple App Store. Mar alla markii aad "Raacdo" Dugsiga Hoose ee St Anthony Park, waxaad si dhakhso leh ugu heli doontaa wararka dugsiga iyo cusboonaysiinta. Kaliya ka raadi "MySPPS" dukaamada barnaamijka. Wax dheeri ah ka baro http://spps.org/MySPPS .
Guri Dib Ulaabo Dugsi
Gurigeenna Furan ayaa noqon doona mid la taaban karo sannadkan, iyada oo fursad aan kula kulmayo dhammaan shaqaalaheena marka lagu jiro, qolka "qolka" internetka. Waxaan soo diri doonaa macluumaad faahfaahsan iyo waqtiyada soo socda.
Waxaad heli doontaa warqad boosta kujirta ugu dambayn Ogosto 27, oo kuu sheegaysa cida ilmahaaga macalin u yahay iyo soo bandhigida shaqaalaha intiisa kale. Maskaxda ku hay in shaqaalaha aan qandaraas lagu siin inay shaqada ku soo noqdaan ilaa Isniinta, Ogast 31, sidaa darteed macallimiinta ayaa la heli doonaa wixii ka dambeeya taariikhdaas haddii aad su'aalo qabto.
Deyrtan, waxaad ku arki doontaa farqi u dhexeeya barashadii guga ee la soo dhaafay. Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul waxaa ka go'an inay siiyaan ka-qaybgal dheeraad ah, xiriirro dheeri ah oo lala yeesho shaqaalaha iyo asxaabta, iyo in ardayda oo dhan lagu sii adkeeyo. Si kastaba ha noqotee, waxaan sidoo kale dooneynaa barashada inay noqoto mid dabacsan oo ku habboon baahiyaha guri kasta. Waxaad ka heli doontaa macluumaad jadwal gaar ah macallinka ilmahaaga, laakiin waa inaad ka fileysaa:
Ugu yaraan hal iskudhaf (isla mar ahaantaana, si toos ah ugaqeyb gala shirarka fiidiyowga) kulan maalinle ah macalinka.
Macalinka "saacadaha shaqada" markay diyaar u yihiin jeegaga iyo caawinta.
Qiimeynta iyo qiimeynta dhammaan maadooyinka.
Adag iyo hawlgal ka badan gugii hore.
Shaqaalaha kale ee diyaar u ah inay taageeraan ardayda markii loo baahdo.
Caafimaadka Maskaxda Ardayda iyo Taageerada
Waxaan garowsanahay in xirnaanshaha iskuulka, barashada fogaanta, iyo COVID-19 ay sababi karaan culeys saaid ah oo ku dhaca inbadan oo kamid ah bulshada iskuulkeena, oo ay kujiraan qoysaska, ardayda iyo shaqaalaha. La xiriir la- taliyahayaga iskuulka, Bet Davies (beth.davies@spps.org) ama adeegaha bulshada, Patti Dunder ( patti.dunder@spps.org ) si loo taageero caafimaadka maskaxda ee ilmahaaga iyo in lala xiriiro ilaha bulshada, halka ay ku habboon tahay . Haddii aad u baahan tahay caawimaad xagga waxbarashada masaafada ah, tacliinta, caafimaadka maskaxda, dhibaatooyinka qoyska, guriyeynta, ama degganaan la'aanta cuntada, fadlan nala soo socodsii foomkaan taageerada ardayda . Xubin ka mid ah shaqaalaheena ayaa kula soo xiriiri doona sida ugu dhaqsaha badan si ay kuu caawiyaan.
Macallimiinta ayaa la heli doonaa inta lagu jiro saacadaha iskuulka (7:30 ilaa 2:00) si ay wax u bartaan ulana macaamilaan ardayda. Waxbaris isku mid ah (isla nool, waqti isku mid ah) ayaa jadwal loo sameyn doonaa waqtiyo isdaba joog ah inta lagu jiro maalinta dugsiga. Dhammaan qoysaska waxay lahaan doonaan dabacsanaan si ay u abuuraan jadwal u shaqeeya reerkooda. Inta badan waxqabadyada waxbarashada ee carruurtu waxay noqon doonaan kuwo isku mid ah (samee markasta oo aad rabto). Macluumaad dheeraad ah iyo faahfaahin ku saabsan jadwalka waxay ka imaan doonaan macallimiinta ilmahaaga.
Ku soo dhowow Xubnaha Shaqaalaha Cusub ee 'Wolf Pack'!
Waxaan ku faraxsanahay inaan ku soo dhaweyno shaqaalahan cusub dugsigeena dayrta:
Ms. Lea Brown ayaa nagu soo biireysa kaaliyaha waxbarashada gaarka ah ee waxbarashada. Waxay nooga timaadaa Dugsiga Hoose ee Crossroads ee ku yaal St. Paul waxayna ka soo shaqeysay Dugsiyada Dadweynaha ee St. Paul sannado badan.
Mudane Ray Lynch waa macalinkeena cusub ee Luuqada Ingiriiska. Wuxuu dhowaan ka shaqeeyey Dugsiga Hoose ee afar xilli oo ku yaal St. Paul, wuxuuna ku sugnaa Dugsiyada Dadweynaha ee St. Paul in ka badan 20 sano. Wuxuu la shaqeyn doonaa ardayda baraneysa Ingiriisiga fasalada 1, 3 iyo 5.
Ms. Julie MacGregor Farris waa macallinkayaga cusub ee fasalka saddexaad. Marwo MacGregor waxay bartay darajooyin badan, oo ay ugu dambaysay darajada saddexaad ee Mississippi Creative Arts ee St. Paul. Iyadu waa waalid ka mid ah hal arday oo hadda ah iyo arday hore oo SAP ah, iyo xitaa (sida Mr. Crosby iyo Dr. Duke) waxay ka soo qayb galeen SAP sidii ilmo!
Ms. Lanelle Baerenwald waa dhakhtarkayaga cusub ee cilmiga cudurada / hadalka. Waxay ka soo shaqeysay Iskuulada Dadweynaha ee St. Paul in ka badan 25 sano, waxayna ku nooleyd dhowr meelood oo dugsiyadeena ah sannado badan.
Ms. Cassandra Jannett waa macallinkayaga cusub ee waxbarashada gaarka ah. Waxay macallin fasal ka ahayd Dugsiga Hoose Highland ee St. Paul muddo 7 sano ah waxayna ku faraxsan tahay inay u gudubto adduunka waxbarashada gaarka ah, iyada oo u haysa u adeegidda ardayda leh baahiyaha waxbarasho ee gaarka ah.
Adeegyada nafaqada waxay sii wadi doonaan inay bixiyaan santuuqyo cunno toddobaadle ah iyada oo loo marayo keenista cuntada guriga iyo soo qaadista dhinaca dhinac inta SPPS ay ku jirto barashada masaafada. Dhammaan ardayda u-qalma cuntada bilaashka ah ama qiimaha jaban waxay heli doonaan cunnooyin bilaash ah.
Qoys kasta oo ka tirsan Dugsiyada Dadweynaha ee SPPS waa inay soo buuxiyaan codsi waxtarrada wax-barashada / Cunnooyinka Bilaashka ah ama Qiimaha Yar, iyadoo aan loo eegin dakhliga qoyska soo gala Kaliya maahan tan inay naga caawiso aqoonsiga qoysaska u baahan caawimaadda, waxay sidoo kale u oggolaanaysaa Iskuulada Dadweynaha ee St Paul inay helaan doolar federaal ah oo loogu talagalay barnaamijyada fasalka. Codsiyada waxaa laga heli karaa khadka tooska ah ee ah ' http://schoolcafe.com/spps' iyo codsiyada waraaqaha ah ayaa loogu soo diray guryaha bishii Agoosto.
Dugsiga Waxbarshada Fudud
Iskuulka ' SPPS Virtual Learning School' ayaa ikhtiyaar u ah ardayda PreK-12 ee doorbida inay ku sii jiraan 100% waxbarashada fog ee sanad dugsiyeedka 2020-21 oo dhan. Ardayda iska diiwaangelisa Dugsiga Waxabarashada Virtual waxay ku bilaabi doonaan sanad dugsiyeedka fasalkooda hadda loo qoondeeyay ee St Anthony Park.
Ardayda Dugsiga Waxbarshada Fudud waxay sii joogi doonaan dugsiyadooda iyo fasallada ay hadda ka diiwaangashan yihiin illaa laga beddelayo qaab isku dhafan. Markay degmadu uga gudbeyso heerarka kala duwan ee barashada isku dhafan, ardayda ka diiwaangashan Dugsiga Waxabarashada Buugga waxay u gudbi doonaan fasalladooda Dugsiga Barashada Buugga. Waxaad wax badan ka baran kartaa oo iska diiwaangelin kartaa Dugsiga Waxabarashada ee Virtual http://spps.org/virtuallearning .
Nuqul kalandarkayagu wuxuu ku yaal internetka www.spps.org/stanthony . Fadlan la soco in taariikhaha ay isbadali karaan kolba markuu sanadku socdo, cusbooneysiintana waa la dhajin doonaa waqti ka waqti. Kalandarka degmada oo buuxa, booqo spps.org/calendar.
Caafimaadka Iyo Fayaqabka
COVID-19 Tilmaamaha Ardayda iyo Qoyska
Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul waxaa ka go'an inay ardayda iyo shaqaalahayaga iyo qoysaskooda u siiyaan jawi aamin ah oo caafimaad qaba. Si loo hubiyo in ballanqaadkan la fuliyay, waxaan soo saarnay oo aan sii wadi doonnaa inaan dib u eegis ku sameyno Tilmaamaha COVID-19 ee Ardayda iyo Qoysaska iyadoo laga jawaabayo faafidda cudurka Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
COVID Kheyraadka Tijaabada
Booqo websaydhada Waaxda Caafimaadka ee Minnesota si aad u hesho goob bixisa tijaabinta bilaashka ah ee COVID-19. Xusuusin: Ka hubso bixiyahaaga caymiska kahor ballanta si aad u hubiso in khidmadda booqashada xafiiska la daboolayo.
Dhammaan qoysaska ay carruurtoodu leeyihiin Qorshaha Waxbarashada Shakhsiyeed (IEP) waxaa la soo xiriiri doona kooxdayada waxbarashada gaarka ah inta lagu jiro usbuuca ka hor bilowga dugsiga. Guud ahaan, adeegyada waxbarashada gaarka ahi waxay la jaan qaadi doonaan waxa ku qoran barnaamijka waxbarashada shaqsiga ah (oo aan ahayn wixii ku qornaa xagaaga guga). Kooxda SPED waxay qorsheyn doontaa qof walba oo qoys ah si loo hubiyo inaan adeegyo ku bixinayno qaab u shaqeynaya jadwalka guriga iyo baahida waxbarasho ee arday kasta. Haddii aad su'aalo qabtid, waxaad la xiriiri kartaa maamulaha kiiska ilmahaaga.